Transparency International (TI) dia ONG iraisam-pirenena iray miady amin'ny kolikoly, indrindra izay mety ho ataon'ny governemanta sy ny fitondram-panjakana.
Ahitana vakim-pileovana amin'ny firenena maherin'ny 80 izy, anisan'izany i Madagasikara, ary manana fitanan-tsoratra foibe. Tamin'ny voalohany dia fikambanana alemanina ihany izy, fa nony nivelatra dia nanjary lasa fikambanana iraisam-pirenena ; ary mivoatra tsikelikely hanana rafitra fikambanana demokratika manontolo. Milaza tena izy fa :
Transparency International dia fikambanana tsy miankina manolo-tena ho mpamaky lay amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny tanjony dia ny hanokatra fifanakalozana hahafahana manorina tontolo tsy ahitana kolikoly.
Tsy manao ny firenena tavaratra ho efa lasa lavitra amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly izy, fa miezaka mempiseho ny olana rehetra momba ny kolikoly eran-tany kosa.
Mamoaka tatitra isan-taona momba ny kolikoly ny Transparency International, ao ny tatitra ankapobeny momba ny kolikoly ary indrindra koa ny tahan'ny fiantraikan'ny kolikoly isaky ny firenena.
Na izany aza anefa dia kianin'ny ampahan'olona ihany ny valim-pikarohana avoakany momba ny kolikoly noho ny fanadihadiana miankina amin'ny fijery manokan'ny olona anontaniana, izay tsy voatery ho fijery mahitsy. Ankoatr'izay koa dia tsy voatery hitovy isaky ny firenena akory ny famaritana ny atao hoe kolikoly : Ny fanomezana mety ho ara-dalàna any amin'ny firenena iray dia mety ho tsy ara-dalàna kosa any amin'ny firenena hafa ; torak'izany koa, ny fikafika azo leferina any amin'ny firenena iray dia mety ho kolikoly avo lenta any amin'ny firenena hafa.
I Peter Eigen no nanorina ny Transparency International sady filohany hatramin'ny taona 2005, ary i Huguette Labelle kosa no nandimby azy hatramin'io taona io.
Sehatra ofisialin'ny Transparency International
Tatitra eran-tany momba ny kolikoly tamin'ny taona 2005 Archived Aprily 3, 2005 at the Wayback Machine
Tahan'ny fiantraikan'ny kolikoly, taona 2005
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparency_International&oldid=1013811"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 03:55
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 03:55 ity pejy ity.